Forum serasera malagasy Maninona rehefa ny ankizy no manokatra vilany dia ... - Dinika forum.serasera.org
Maninona rehefa ny ankizy no manokatra vilany dia ...
Fitohizan'ny hafatra : Maninona rehefa ny ankizy no manokatra vilany dia ...
Alfantomas - 27/06/2013 07:22
Maninona rehefa ny ankizy no manokatra vilany dia hoe mangalampihinana fa rehefa lehibe dia hoe manandran-tsira?
pisoonja - 27/06/2013 07:55
Satria zaro @ lalana tokony alehany ny zaza fa rehefa lehibe aza izy dia tsy ho afaka @ izany, ampianarina tsy hanoka-bilany izy fa ratsy izany
alfantomas - 27/06/2013 08:56
ka izay mihintsy ilay fanabeazana tsy mety satria ataon'ny ray aman-dreny lainga ny fanabeazana ka tsy fantatry ny ankizy akory ny antony tsy namelana azy ireo hanao an'izao na izao. ohatra: tsy fantany hoe maninona izy no tsy avela manokatra vilany nefa ny lehibe manao dia mba ataony koa ilay izy satria tsy ampahafantarin'ny lehibe hoe ratsy izany fa raha avy dia tsorina hoe ratsy ny mihinana alohan'ny eny ambony latabatra dia mora kokoa ho an'ny ankizy ny mandray ny fanabeazana omena azy
hery - 27/06/2013 09:17
Na izany na tsy izany dia misy fetrany ihany koa ny fahatakaran'ny ankizy hevitra. Dia izay zavatra takany aloha no lazaina azy. Rehefa lehibe izy hahalala ihany.
Matetika tsy dia mety loatra ny manazava siansa be ny ankizy rehefa mba manontany zavatra sarotra izy... izay koa ilay lalao e
5laody - 27/06/2013 12:39
Ilay mandaka rindrina kosa tokony ho voazava hoe izay mandoto manasa na lafo ny loko tsy azo sasana e.
Ampianaro handray andraikitra ny ankizy zalahy sy zavavy a! ampianaro mahandro izy dia izy no manandra-tsira.
siga_soa - 27/06/2013 13:10
Ka ny ray aman-dreny taloha, isika malagasy, dia tia miteny an-kolaka, tsy dia mahazatra antsika ny miteny mivantana. Fomba nentina nampianarana ny zaza fahiny handalina koa ny ankabeazan'ireny fandrarana isan-karazany ampiarahina amin'ny fahavoazan'izay olona akaiky heverina ho tena tiana. Ohatra ilay hoe tsy mahazo mandaka rindrina fa mahafaty renibe.
Mikasika ilay manoka-bilany indray dia mety ho ankolaka koa no nentina nilazana izany satria mety ho may ny tanan'ilay zaza raha mandray tako-bilany mahamay, dia nolazaina fa mangalam-pihinana izay toetra ratsy teo @ ankohonana sy ny fiaraha-monina. Ny zavatra lazain'ireo taloha ireo dia misy hevitra ambadika foana.
jobiely - 01/07/2013 14:48
satria ny lehibe tsy diso loll